AYTHAYA SHIRAZ AND DORNFELDER CUVEE RED WINE 2015 75CL
အကောင့် ဝင်ရန် စာရင်းသွင်းရန်
အသား ကြက်ဘဲ နှင့် ပင်လယ်စာ
ကော်ဖီစေ့ | ကော်ဖီကြမ်း | အသင့်သောက်ကော်ဖီ | အသင့်ရောစပ်ထားသောကော်ဖီ
အရည် | အမှုန့်
100%အသီးဖျော်ရည် | 100% မဟုတ်သောအသီးဖျော်ရည်
လူကြီးသောက်သောနို့မှုန့် | ချောကလက် | ကိုကိုး | မုယော | တခြား
ပဲနို့ | ပေါင်းခံပြီးသောနို့
ကာဗွန်နိတ်အချိုရည် | ကော်ဖီ | အားဖြည့် အချိုရည် | အားကစားအတွက် အချိုရည်
အဆီကျ လက်ဖက်ခြောက် | အင်္ဂလိပ်လက်ဖက်ရည် | ပြည်ပတရုတ်လက်ဖက်ရည် | အသင့်ဖျော်လက်ဖက်ရည် | ပြည်တွင်းတရုတ်လက်ဖက်ရည် | လက်ဖက်ရည် | စီလုံလက်ဖက်ရည်
သဘာ၀ရေ | သန့်စင်ထားသောရေ | စပါကလင်ရေ
ရှမ်းဆန် | ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန် | တခြား
ပဲဆီ | သံလွင်ဆီ | ပဲပိစပ်ဆီ | ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ | နေကြာဆီ | နှမ်းဆီ
ကြာဇံ | ခေါက်ဆွဲခြောက်နှင့်အီတလီခေါက်ဆွဲ | အသင့်စားခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ် | အသင့်စားခေါက်ဆွဲဗူးသေး | အသင့်စားကြာဇံထုပ် | ခေါက်ဆွဲခြောက် | ကြာဇံခြောက် | ပါစတာ
အစားအစာပြင်ဆင်ရာတွင်သုံးသည့် ပစ္စည်းများ | ဟင်းအနှစ်များ | ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်နှင့်အရသာမှုန့် | အသုပ်သုပ်ရန်ဆော့များ | ရှာလကာရည်နှင့်ဟင်းချက်ဝိုင်​ | ဆား | ငပိနှင့်ငံပြာရည် | ပဲငံပြာရည် | ခရုဆီ | ပါစတာဆော့စ် | အရံများ
နို့ထွက်ပစ္စည်းမဟုတ်သောအမှုန့် | နို့ဆီ | နို့စိမ်း
သကြား | သကြားအစားထိုး
တူနာငါး | ငါးသေတ္တာ | တခြားပင်လယ်စာ
၀က်ပေါင်ခြောက် | တခြား
ပဲနှင့်စားတော်ပဲအမျိုးမျိုး | ဟင်းသီးဟင်းရွက် | သနပ်နှင့်ပြုပြင်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်
ထောပတ်နှင့်ယိုများ | ပျားရည် | တခြားယိုများ
ပြောင်းဖူးမုန့်ဆန်း | အသင့်စားအာဟာရပြည့်အစားအစာ
ပြည်ပသွင်း အာလူးကြော် | ပြည်ပသွင်းပင်လယ်စာမုန့် | ရေညှိမုန့် | ပြောင်းဖူးကြော်မုန့် | မုန့်ကြွပ် | တခြားမုန့်
သကြားလုံး | ဂျယ်လီနှင့်ပီကေ | ပူရှိမ်းချိုချဉ်များ | ပီကေ
ချောကလက်ပြား | ချောကလက်လုံး | ချောကလက်မုန့် | ပုံသွင်းထားသော ချောကလက် | ကွတ်ကီးနှင့်ဝေဖာမုန့်များ
ဘီစကစ် | မုန့်ကြွပ် | ကွတ်ကီးမုန့်များ | အသီးနှင့်ပုံဖော်ထားသောကိတ် | ဝေဖာ
ကလေးနို့မှုန့် | မိခင်နို့မှုန့်
ကျန်းမာရေးအတွက် ဖျော်ရည်မျာ | အထူးဖော်စပ်ထားသော ဖျော်ရည်
ရေခဲမုန့် | ဒိန်ချဥ် | ဟင်းချက်ခရင်(မ်) | ချိစ် | ထောပတ် | ခရင်(မ်) | ကြက်ဥ ဘဲဥ ငုံးဥ | နွားနို့ | တခြားနို့ထွက်ပစ္စည်းများ
ဂျုံမှုန့် | အသင့်စားအစားအစာ | မုန့်ဖုတ်ရန်နှင့်အချိုပွဲပစ္စည်းများ | ဖျော်ရည်အဆီ
ပေါင်မုန့် | ရိုးရာမုန့်များ | ကိတ်မုန့်
ပြုပြင်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက် | ပြုပြင်ထားသောအသား | ပြုပြင်ထားသောပင်လယ်စာ
အေးခဲထားသောအာလူးချောင်းကြော်နှင့်အာလူး | အေးခဲပြုပြင်ထားသောပင်လယ်စာ | အေးခဲပြုပြင်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက် | အေးခဲထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက် | အေးခဲထားသောမုန့်သား | အေးခဲထားသောအသီးနှင့်အနှစ်များ | အသင့်စားမုန့် | အေးခဲပြုပြင်ထားသောအသား
သိုးသား | ဝက်သား | နွားကလေးအသား | အမဲသား
ဝက်သား | အမဲသား | ဆိတ်သား
ဘဲသား | ကြက်သား
ငါး | ဂုံး၊ ကမာနှင့်ရေဘဝဲ | ပုဇွန်နှင့်ဂဏန်း
ပန်းသီးနှင့်အရည်ရွှမ်းသီးများ | သံပရာမျိုးဝင်အသီး | ဖရဲသီး | အသီးမာများ | ရာသီစာအသီး | တခြားသစ်သီးများ
ပင်စည်နှင့်အဖူးများ | ပန်းပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက် | အစိမ်းရောင်ရွက်များ | ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ပင် | မှို | အသီးတောင့် | ဥအမြစ်များ | ဟင်းသီးဟင်းရွက်
ရောစပ်ပြီး ကောက်တေး | အခြားအရက်များ | အရက် | ပြည်တွင်း / စပယ်ရှယ်
ဝိုင်နီ | နှင်းဆီဝိုင် | စပါကလင်ဝိုင် | ဝိုင်ဖြူ | လျှော့စျေးဝိုင်များ
မျက်နှာသစ်ပစ္စည်း | မျက်နှာအလှဆီ | မျက်နှာထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်း | မုတ်ဆိတ်ရိတ်ပစ္စည်း
ဆံပင်ပြုပြင်ဆေးရည် | ခေါင်းလျှော်ရည်
သွားတိုက်တံ | သွားတိုက်ဆေး
အမျိုးသမီးသန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း | အမျိုးသမီးလစဥ်သုံးပစ္စည်း
အရေပြားအစိုဓာတ်ဖြည့် လိမ်းဆေးများ | အသားအရည်ထိန်းသိမ်းပစ္စည်းများ
ရေချိုးဆပ်ပြာတုံး | ရေချိုးဆပ်ပြာရည်
မှန်သန့်စင်ပစ္စည်း | ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာသုံးသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း | ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာ | ကြမ်းခင်းသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း | မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း | စွယ်စုံသုံးသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း | အရောင်တင်ဆေး
ရေချိုးခန်းသုံးတစ်ရှူး | မျက်နှာသုံးတစ်ရှူး | ရေစိုတစ်ရှူးနှင့်မျက်နှာသုတ်ပဝါ | မီးဖိုချောင်သုံးတစ်ရှူး
ဂျယ်လ်အမွှေးပစ္စည်း | အရည်အမွှေးပစ္စည်း
အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာမှုန့် | အဝတ်ပျော့အမွှေးရည် | အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာရည်
အင်းဆက်ဖြန်းဆေးရည်များ | ပရုတ်လုံးနှင့်အဝတ်မွှေးပစ္စည်း
တည်ခင်းပန်းကန်ခွက်‌‌ယောက်များ | ထမင်းစားပန်းကန်ခွက်ယောက်များ | သောက်စရာခွက်နှင့်ကရား | ဇွန်းခရင်းများ
အစားအစာပြင်ဆင်မှုသုံးပစ္စည်းများ | မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း | ချက်ပြုတ်ရေးကိရိယာ | မုန့်ဖုတ်ပစ္စည်း
မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေးအပိုပစ္စည်း | ရေချိုးခန်းသုံးအကူအညီပစ္စည်း | အိမ်သုံးသန့်ရှင်းရေးအပိုပစ္စည်း
အစားအစာထည့်ပစ္စည်း | ခြင်းတောင်းအသေး | ရေဘူး | ထမင်းဘူး | အပူခံဘူး
တခါသုံးအပိုပစ္စည်းများ | တခါသုံးအိတ်များ | တခါသုံးပန်းကန်ခွက်ယောက်များ | အစားစာထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ | ပါတီသုံးပစ္စည်း
မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းထည့်စရာ | ပလပ်စတစ်စင်
ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာ | ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာများ
အိပ်ခန်းပစ္စည်း နှင့် ပု၀ါ
လက်ဆေးဆပ်ပြာ | လက်သန့်ဆေးရည်
ပင်မစာမျက်နှာ > ဘီယာ၊ဝိုင်နှင့်အရက် > ဝိုင် > ဝိုင်နီ > AYTHAYA SHIRAZ AND DORNFELDER CUVEE RED WINE 2015 75CL
ဈေးနှုန်းကြည့်ရန် စာရင်းသွင်း၍ အကောင့်၀င်ပါ
ကုန်ပစ္စည်း ကုဒ်: #120702330240
ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်: AYTHAYA
ထုတ်လုပ်ရာ နိုင်ငံ: MYANMAR
သိမ်းဆည်းရမည့် အပူချိန်: Aircon
Dry-ruby in colour.The decent aroma of wood.its fruity componenets reminiscent of driied plums and cherries give this wine its typical note.Velvet-soft tannin withadecent background acidity gives this wine its well-balanced structure.
All red meat and all sorts of venison, lamb and barbeque dishes. Its excellent with mushrooms and with nearly all kinds of cheeses.
CASILLERO DEL DIABLO CABERNET SAUVIGNON RED WINE 75CL
MONTE VINO CINSAULT RED WINE 0.375CL
CANTINE RONCO ROSSO BECCACCIA RED WINE 5LTR
EGOT CABERNET MERLOT RED WINE 75CL
EGOT MERLOT SANGIOVESE RUBICONE RED WINE 75CL
ANTINORI PEPPOLI CHIANTI CLASSICO RED WINE 75CL
ANTINORI SANTA CRISTINA TOSCANA RED WINE 75CL
NEDERBURG MANOR HOUSE CABERNET SAUVIGNON RED WINE 75CL
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း Follow Us
အော်ဒါလမ်းညွှန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အချက်အလက်လုံခြုံရေးမူဝါဒ
Customer Service သို့ ဆက်သွယ်ရန်
၀၉ ၇၇၀ ၇၆၀ ၈၈၈ (တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့ထိ - မနက် ၉နာရီမှည၇နာရီအတွင်း)
၀၉ ၇၇၈ ၄၉၆ ၄၈၀ ဆက်သွယ်ရန် မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်း
Sign up to receive email about product launches, events, deals & more!
Copyright © AZAY Co., Ltd. All Rights Reserved.
Stay Logged In By logging in, you agree to our terms & conditions
I don’t have an account, Register
စကားဝှက် မှတ်ထားရန် Azay စည်းကမ်းချက်များကို ဖတ်ရှိနားလည်ပြီးဖြစ်ပါသည်။